HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 Ankara(FLASH NEWS) Tareenka rakaabka magaciisu yahay Karesi Ekspresi, oo ka dhigey duulimaad Ankara - İzmir ah, oo lagu afduubay xudduudaha Balikesir
(FLASH NEWS) Tareenka rakaabka magaciisu yahay Karesi Ekspresi, oo ka dhigey duulimaad Ankara - İzmir ah, oo lagu afduubay xudduudaha Balikesir
15 / 02 / 2012 06 Ankara, 10 Balikesir, 35 Izmir, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Tareenka rakaabka ayaa ka cararay tuulada Nusret ee magaalada Kepsut ee Balikesir sababay cabsi. Ankara-Balıkesir-Izmir Express Karesi Express, Dursunbey iyo Kepsut oo u dhaxeeya saldhiga tareenka ee Nusret ayaa ku dhawaaday.
Subaxnimadii 04.00, tareenka ku soo dhawaaday saldhigga Nusret waxaa lagu tuuray dhagax buuran. Si dhakhsa ah, rakaabkii tareenka ayaa istaagay oo la kulmay cabsi weyn iyo argagax. Rakaabka ayaa isku tuuray argagax, waxay arkeen in qeyb ka mid ah tareenka ay ku yaalaan dhinaciisa.
Iyada oo jihada xarumaha dhaqdhaqaaqa ay ka qayliyeen wicitaankii injineerka ee gargaarka deg dega ah, ayaa lala xiriirey tareenka madaarka ah. Tareenka Blue ee ku dhow Dursunbey waxaa lagu amray inuu joojiyo saldhigga Dursunbey. Rakaabka iyo tareenada xamuulka ah isla jihadaas awgood ayaa sababay shilkii ay gashay xarunta dhaqdhaqaaqa TCDD ilaa iyo waxbarashadii labaad.
Dhanka kale, rakaabka goobta ayaa laga soo qaaday saldhigga tuulada Nusret iyada oo la raacayo basas laga soo rarayo saldhigga Dursunbey ee magaalada Dursunbey sugaya tareenka Blue. Ka dib markii laga saaro baabuurta wata jidka tareenka, muwaadiniinta waxay sii wadeen socdaalkooda iyagoo raacaya Tareenka Blue.
Baadhitaan lagu galay shil tareenka ayaa ka soo noqday dhacdada musiibada.
Shirkadda Shiki-shima ee Tiknoolajiyada Tareenka ee ugu weyn Japan ayaa safarkeeda ugu horeeya
Barnaamijka Tababarada INESS waxaa lagu qabanayaa Paris on 07 / 03 / 2012
Mashruuca Electrocification Center ee Xarunta Ganacsiga ee TCDD Hasanbey